अनुप कुमार बराल	|| 24 June, 2021
नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये १.७३ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको सिन्धुपाल्चोक बागमती प्रदेशको १३ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । पछिल्लो ७ वर्षमा यो जिल्लाले सबैभन्दा बढी प्राकृतिक विपत्ति खेपेको छ । भूकम्प र बाढीपहिरो त सिन्धुपाल्चोकबासीका लागि हरेक वर्ष भोग्नै पर्ने नियती झैँ बनेको छ । हिमताल फुट्ने भ्रामक हल्लाले आतंकित भएर भागाभागको अवस्था पनि झेलेको छ यसले ।
२०७१ मा जुरे पहिरोका कारण १ सय ४५ ले अकालमा ज्यान गुमाए । १ सय २७ घरपरिवार विस्थापित भए । यति ठूलो जनधनको क्षतिपछि समेत सरकारले पहिरो रोकथाम एवं विपद व्यवस्थापनमा ठोस पहलकदमी आवश्यक ठानेन । जसका कारण सात वर्षपछि (२०७८ आषाढ १) सिन्धुपाल्चोकले बाढीपहिरोकै कारण पुनः ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो ।
२०७२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पको पराकम्पन अझै रोकिएको छैन । पछिल्लो क्षतिले सिन्धुबासीको घाउ लामो समय बिसन्चो हुने गरी बल्झाई दिएको छ । यो अवधिमा धेरै सरकार फेरिए, शासक फेरिए, दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बन्यो, भत्कियो । तैपनि राजधानीसँगै सीमा जोडिएको सिन्धुको दुःख कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । चीनसँग सडकमार्ग भएर जोड्ने सिन्धुपाल्चोकको महत्वपूर्ण नाका तातोपानीले देशको राजस्वमा गरेको योगदानको कदर सरकारले गर्नै सकेन ।
सिन्धुपाल्चोकमा औसत २६१.५ मिलिलिटर वर्षा हुन्छ । तर, भूगर्व विद्हरुको अध्ययनमा त्यहाँ १ सय ४४ मिलिलिटर भन्दा बढी पानी पर्नु पहिरो जानसक्ने प्रबल सम्भावनाको संकेत हो । के यो विषयमा विज्ञ टोलीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन र ?
पछिल्लो भूकम्पमा सबैभन्दा बढी ३ हजार पाँच सय ७३ जना सिन्धुबासीले ज्यान गुमाए । ६३ हजार बढी घरटहरा क्षतिग्रस्त भए । ७१ सालको पहिरो, ७२ सालको भूकम्प, ७३ सालको भोटेकोशी बाढी होस् वा ७४ सालको पहिरो । जसले लार्चा भोटेकोशीको पुल नै बगायो । पछिल्लो मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको बाढीको कहर । बाढीपहिरोले लगातार विध्वंस मचाइरहँदा के सरकारले नजर अन्दाज गरिरहन मिल्छ ? यस्तो संवेदनशील बिषयमा खोई सरकारको भूमिका ? किन मौन छ सरकार ? विपद् व्यवस्थापन आफैंमा किन अलपत्र ? साँच्चै भन्दा सरकार यतिबेला रमिते बनेकाे छ ।
२०७७ असारको पहिरोले बरुवा, मेलम्ची ,जम्बु, बुल्कोटे लिदीमा समेत ७४ जनाको ज्यान लियो । १ सय ६८ बेपत्ता भए । यसरी नियमित विपत्ती भोगिरहेको जिल्लामा खोई त विपत् व्यवस्थापनको दरिलो योजना ? हामी किन चुकिरहेका छौं ? कहिले सोच्ने, कस्ले सोच्ने ? सिन्धुबासीले अझै कति गुमाउनु पर्ने ? सरकारले सोच्ने समय अझै पर्खनु पर्ने हो र ? मानवीय क्षति त टाउको गनेर भन्न सकिएला तर भौतिक संरचना र विस्थापितहरुले भोगेका पीडाको मूल्यांकन कसले गर्ने ? पछिल्लो अवस्थाहरुले सिन्धुपाल्चोकको परिस्थिति र भू–बनोटको गहिरो प्राविधिक अध्ययन मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
व्यक्तिगत र जनस्तरबाट संकलित राहतको समेत उचित बाँडफाँड हुन नसकेको गुनासो छ । यस्तो कठिन परिस्थितीमा विपद व्यवस्थापन के गर्दैछ ? भूमिका के हो भन्ने आम प्रश्न हो ।
सिन्धुपाल्चोकमा औसत २६१.५ मिलिलिटर वर्षा हुन्छ । तर, भूगर्व विद्हरुको अध्ययनमा त्यहाँ १ सय ४४ मिलिलिटर भन्दा बढी पानी पर्नु पहिरो जानसक्ने प्रवल सम्भावनाको संकेत हो । के यो विषयमा विज्ञ टोलीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन र ?
सिन्धुपाल्चोकमा अघिल्लो साता आएको बाढीले अहिलेसम्मकै ठूलो क्षति गरेको छ । सयौँ परिवार घरबारबिहीन भएका छन् भने बाटो–घाटो पुल–पुलेसा घर–खेत बगरमा परिणत भएको छ । यस्तो अवस्थामा पीडितले मुलुकमा सरकार रहेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । हेलम्बुका पीडितहरुले त गाँसबास, सञ्चार र सडक सञ्जालबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ ।
व्यक्तिगत र जनस्तरबाट संकलित राहतको समेत उचित बाँडफाँड हुन नसकेको गुनासो छ । यस्तो कठिन परिस्थितीमा विपद व्यवस्थापन के गर्दैछ ? भूमिका के हो भन्ने आम प्रश्न हो । त्यसैले वर्षेनी आउने प्राकृतिक विपत्ति बारे सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले पूर्वानुमान गरी समयमै जनताको जिउ धनको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ ।
[…] बेलायती रेलमा गोर्खाली शान (भिडियोसहित)सिन्धुबासीका साथमा कलाकारः पहिलो दिनै उठ्यो ३२ लाख, कसले कति गरे ? (भिडियोसहित)सिन्धुपाल्चोक बारे किन मौन छ सरकार ? […]